Iray amin'ireo loka tsara indrindra amin'ny sarimihetsika tato ho ato | Famoronana an-tserasera
Tsy haiko raha efa nahita ny sarimihetsika ianao na tsia "Sambory aho raha afaka (2002)" nataon'i Steven Spielberg fa raha mbola tsy hitanao dia omeko anao izy. Sarimihetsika tena tsara mifototra amin'ny zava-misy marina ary misy mpilalao sarimihetsika roa toa an'i Leonardo DiCaprio sy Tom Hanks.
Saingy tsy eto aho mba hilaza aminao momba ny sarimihetsika fa momba ny trosa. Ho ahy, izy ireo dia iray amin'ireo loka tsara indrindra amin'ny sarimihetsika, tsy amin'ny fahitana ihany fa noho izy ireo manazava ny momba ilay sarimihetsika dia mitantara tantara iray izy ireo.
Ity filaharan'ny lohateny ity mametraka ny vanim-potoana, ny fomba ary ny feon'ny fitantaran'ilay sarimihetsika fampiasana sary Retro amin'ny gadona jazz noforonin'i John Williams, angano malaza, izay manome rivotra mahafinaritra sy tsy mitaha amin'ny fotoana iray.
Ireo mari-pankasitrahana ireo dia noforonin'ny mpivady frantsay, Olivier Kuntzel sy Florence Deygas, izay nahazo aingam-panahy avy amin'ireo filaharam-boninahitra nosoratan'i Saul Bass. Araka ny fieken-keloka nataony, izay tadiavin'ireto mpivady frantsay ireto dia mampiditra famolavolana amin'ny tanana de Saul Bass, ny kapoka sy ny endriny, mampiasa haino aman-jery ankehitriny sy ny haitao farany maoderina.
Ho an'ireo izay tsy mahalala, Saul Bass dia mpamorona sary malaza, fantatra amin'ny asany amin'ny sehatry ny sarimihetsika ary amin'ny famolavolana ny sasany amin'ireo mombamomba an'i Etazonia manan-danja indrindra.
Raha ny filazan'ilay mpamorona endrika Kuntzel dia io Spielberg io ihany no nangataka taminy ny crédit hanana io 60 io “Tamin'izany fotoana izany dia sary mihetsika ny sary. Spielberg dia naniry ny filaharana hametrahana ny mpijery ao anatin'io fe-potoana io ary miaraka amin'izay hampahafantatra azy ireo ilay tantara ”.
Amin'izao fotoana izao dia manana studio antsoina hoe Kuntzel + Deygas natokana ho an'ny famolavolana fanaka, ny sary, ny lamaody ary ny sarimiaina ireto mpanakanto roa ireto.
Ity misy kely momba ny tantaram-piainan'ireto mpanakanto roa ireto:
Amin'ny ilany ankavia i Olivier Kuntzel sy eo an-kavanan'i Florence Deygas
3 Kuntzel + Fianarana Deygas
Olivier kuntzel dia mpamorona endrika sy mpanao sary monina any Paris, France. Izany dia Diplaoma amin'ny fifandraisana Visual amin'ny haingon-trano haingon-trano Olivier de Serre. Tamin'ny taona 1988 dia fantatra tamin'ny asany "Tapis dans l'ombre" izy.
Tamin'ny taona 1990 dia namorona an'i Kuntzel + Deygas izy, niaraka tamin'i Florence Deygas, ary nanohy namorona ny mari-pankasitrahana voalohany ho an'ny "Catch Me If You Can" (Steven Catch Me If You Can) (Steven) Spielberg (2002), ny filaharana misy ny lohateny hoe The Pink Panther (2006), sy ny lohateny lehibe .n'i Le Petit Nicolas (2009). Niasa tamin'ny fanentanana dokambarotra ho an'ny American Express, Guerlain ary Renault koa izy.
Izy dia nampiranty tao amin'ny Ici Paris Beaubourg, Joyce Gallery, Spree Gallery, tao MOMA tamin'ny taona 1990, ary tao amin'ny Grand Palais tamin'ny 2006, ary nahazo loka D&AD tamin'ny 2004.
Florence Deygas dia mpamorona endrika sy mpanao sary monina any Paris, France. Nahazo diplaoma tamin'ny sarimihetsika mihetsika izy ao amin'ny Gobelins School any Florence. Niditra tamin'ny sehatry ny lamaody sary tamin'ny fahombiazana lehibe izy ary tonga mpikambana tao amin'ny sekoly 'kanto sary'. Niara-niasa tamin'ny Big, Japanese Vogue, Colette, hanitra Yves Saint-Laurent, ary Bourjois izy tamin'ny taona 1998 ka hatramin'ny 2001. Anisan'ny seho vondrona "Traits Très Mode" izy ary nanana fanekena maro tamin'ny lamaody sy tantaran'ny boky lamaody.
Tamin'ny taona 1990, niaraka tamin'i Olivier Kuntzel, dia namorona an'i Kuntzel + Deygas izy ary nanohy namorona ny mari-pankasitrahana ho an'i Steven Spielberg, "Catch Me If You Can" (2002), ny filaharana misy ny lohateny hoe The Pink Panther (2006), ary lohanteny Le Petit Nicolas (2009). Niasa tamin'ny fanentanana dokambarotra ho an'ny American Express, Guerlain ary Renault koa izy.
Toa an'i Olivier Kuntzel, dia nampiranty tao amin'ny Ici Paris Beaubourg, Joyce Gallery, Spree Gallery, tao amin'ny MOMA tamin'ny taona 1990, ary tao amin'ny Grand Palais tamin'ny 2006, ary nahazo loka D&AD tamin'ny 2004.
Kuntzel + Fianarana Deygas
Ity fandalinana ity dia nipoitra avy amin'ny sendikan'ny Olivier kuntzel y Florence deygas. Mifantoka amin'ny asa ao amin'ny famoronana toetra toy ny hatsaran-tarehy sy ny biby samy hafa endrika, biby, sariitatra sary mety hanimba an'izao tontolo izao, jiro velona sy mpandahateny. Izay rehetra avy amin'ny eritreritrao. Ireo zavaboary sendra ireo dia mifanaraka amin'ny famolavolana, lamaody ary koa sarimihetsika.
Nahavita tetikasa izy: Ahkah, American Express, Azzaro Couture, Baccarat, Colette, Diptyque, Goyard, Guerlain, Isetan Tokyo, Jaeger-Lecoultre, Joyce Hong Kong ary Paris, Le Bon Marché, Mitsukoshi Tokyo, Nokia, Veuve Clicquot, Vogue Nippon ... ary sinema: Agathe Cléry, Sambory aho raha vitanao, Le petit Nicolas, In Otto, The Pink Panther ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Iray amin'ireo loka tsara indrindra amin'ny sary mihetsika tato ho ato
Dribbble Graphics dia mamaly amin'ny asa maimaim-poana